About Cookies-vivo VISION+
vivo က cookies နှင့်အလားတူနည်းပညာများကို ဘယ်လို အသုံးပြုသလဲ။
vivo VISION + website တွင် vivo Communication Technology (Shenzhen) Co. , Ltd. မှ cookies နှင့် အလားတူနည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
cookies နှင့်အလားတူနည်းပညာများ ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
cookie ဆိုသည်မှာ ကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆာဗာမှ ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ်) မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသောစာသားဖိုင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းအကြောင်းအရာများကို ၎င်း cookie ကို ဖန်တီးသောဆာဗာမှသာ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ cookie များသည် သင်အသုံးပြုနေသော browser (သို့) mobile application အတွက် ထူးခြားသည်။ cookie မှ စာသားများသည် မကြာခဏ ဖော်ပြပေးသူများ၊ ဆိုက်အမည်များနှင့် နံပါတ်များနှင့်အက္ခရာများ ပါဝင်သည်။
cookies များနှင့် ဆင်တူသည်က ဒေသတွင်းမျှဝေထားသောအရာဝတ္ထုများ(Local Shared Objects များ (“ Flash cookies” ဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့် HTML5 ဒေသတွင်း သိုလှောင်မှုသည် သင်၏ကိရိယာတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းပြီး သင်၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် နှစ်သက်ရာများအကြောင်း အချို့အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
cookies များအပြင် vivo သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ web beacons သို့မဟုတ် pixel tags များကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ Web beacon သည် များသောအားဖြင့် သင် ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့မဟုတ်) အီးမေးလ်ကို ကြည့်သောအခါ သင်၏ cookies များကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့မဟုတ်) အီးမေးလ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော အီလက်ထရောနစ်ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများ ဖြစ်သည်။ Pixel tags များက vivo သည် အီးမေးလ်များကို သင့်အတွက် ဖတ်နိုင်သောနည်းဖြင့် အီးမေးလ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းရှိမရှိကို ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ vivo ဝက်ဘ်စာမျက်နှာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကလစ်နှိပ်၍ရသော URL ပါသည့် vivo မှ အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို သင် ရရှိနိုင်သည်။ သင် link ကိုနှိပ်လိုက်ပါက vivo သည် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဦးစားပေးမှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီရန်သင်၏လည်ပတ်မှုကို ခြေရာခံလိမ့်မည်။ သင်သည် ဤနည်းဖြင့် ခြေရာခံရန် မလိုချင်ပါက vivo ၏ စာပို့စာရင်းမှ အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
vivo သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ အောက်ပါ cookies နှင့်အလားတူအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာအချက်အလက်များ
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာအချက်အလက်များ၏ အချက်အလက်များမှာ အဘယ်နည်း။
cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာအချက်အလက်များသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက် လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ပိတ်ထားခြင်း မရနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies များနှင့်အလားတူနည်းပညာများ၏ ဒေတာများကို အသုံးပြုကြသနည်း။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ vivo သည် အသုံးပြုသူများအား စစ်မှန်ခြင်းကဲ့သို့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန် ထို cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် vivo သည် သင်၏ settings နှင့်ရွေးချယ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် - ဥပမာ HTML5 local storage ကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ - သင်၏ website၏ ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု။
အဘယ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော cookies များတွင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအခြားအသုံးပြုသူများနှင့် သင့်ကိုခွဲခြားရန် အသုံးပြုသော ID များပါဝင်နိုင်သည်။ ဤထူးခြားသော ID အမျိုးအစားများသည် သင်၏တောင်းဆိုမှုများကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် ဆာဗာဆက်များကို ထိန်းသိမ်းရန်အသုံးချပြီး သင် ဆိုက်မှထွက်လျှင် ထို session များကို ဖျက်ပစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဒေတာများကို တတိယပါတီများနှင့် မျှဝေပါသလား။
vivo သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်အရင်းအမြစ်များကို hosting လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် third-party website အခြေခံတည်ဆောက်ပေးသူများကို အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် ဤ site ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် မှီခိုနေသည့် တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြီးမြောက်ရန် သင် ဤ site ကိုသွားသောအခါ cookies များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဤ cookie များနှင့် သက်ဆိုင်သောနည်းပညာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်နိုင်ပါသလား။
သင်၏ cookies များကို အချက်အလက်များနှင့် ပိတ်ဆို့ရန် (သို့မဟုတ်) သတိပေးရန် သင်၏ browser ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သူတို့မရှိဘဲ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သင့်ရဲ့ browser ကို ဘယ်လို cookies နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်အလက်များကို သတိပေးရန် (သို့မဟုတ်) ဘယ်လိုသတိပေးရမလဲဆိုတာ ရှာဖွေရန် Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Safari Opera ကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြုပါ။
Analytic Cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာများ၏ဒေတာများ
Analytic Cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာများ၏ ဒေတာက ဘာတွေလဲ?
Analytic cookies နှင့်အလားတူ နည်းပညာများ၏အချက်အလက်များသည် လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကို တွက်ချက်ရန်၊ visitors များ၏ အရင်းအမြစ်ကိုနားလည်ရန်၊ ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရန်နှင့် တိုးတက်စေရန် vivo ကို ကူညီပါသည်။ Google Analytics နှင့် Facebook ကဲ့သို့သော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးသော တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် သင်၏အမည်ဝှက်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် visitors စုစည်းထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူ analytic cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝင်ရောက်လေ့လာသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကို နားလည်ရန် - ဥပမာ၊ အသုံးပြုသူများသည် အချို့သောစာမျက်နှာများကို စွန့်ခွာခြင်း၊ သုံးစွဲလေ့လာခြင်းရှိမရှိကို သိရှိရန် ဤcookies များကို အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် vivo သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များ၏ တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် ဤ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်သည် cookies setting တွင် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို analytic cookies များကို ငြင်းဆန်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာအချက်အလက်များကိုသုံးပြီး ထိုအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသနည်း။
ဤနည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူခရီးစဉ်များကို ခြေရာခံရန်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသော third-party analytic tools များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် vivo သည် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် စုဆောင်းသည်။ (မှတ်ချက် - အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်အားလုံးသည် အမည်ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။)
၁။ IP ဒေတာ - နိုင်ငံအမျိုးမျိုးရှိ သုံးစွဲသူအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်သော ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။
၂။ ကိရိယာဒေတာ - အစီရင်ခံစာတွင်အသုံးပြုသူများအသုံးပြုနေသော ကိရိယာ၊ ဘရောင်ဇာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု စသည်တို့ပါဝင်သည်။
၃။ အသုံးပြုသူ၏အိုင်ဒီ - အသုံးပြုသူသည် လာရောက်လည်ပတ်သူအသစ်လားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသွားပါမည်။
၄။ အသုံးပြုသူ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို လေ့လာရန် အသုံးပြုသူများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လည်ပတ်မှုများ၊ လင့်ခ်နှိပ်မှုများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိခဲ့ချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်အသုံးပြုပါသည်။
ဒီအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ သိမ်းထားမလဲ။
Analytic cookie များအတွက် ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလသည် cookie ၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် cookies အချို့သည် သတင်းအချက်အလက်များကို ၂၄ နာရီသာ သိမ်းဆည်းသည်၊ ထိုနေ့တွင် သင် ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူတစ် ဦးသာဖြစ်သည်။ အခြားသူများက ၂၄ လအထိ ကြာနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ vivo သည် မည်သည့် version သည် ပိုမိုထိရောက်ပြီးလူကြိုက်များသည်ကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် တူညီသောစာမျက်နှာ၏ ဗားရှင်းနှစ်မျိုးကို ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ သင် cookie သည် ထိုစာမျက်နှာ၏ဗားရှင်း A (သို့မဟုတ်) ဗားရှင်း B သို့သွားခြင်းရှိမရှိကို တဖန်ပြန်လည်မှတ်မိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် vivo သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ A / B ကိုစမ်းသပ်မှုကနေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဒေတာရလဒ်များကို ရရှိသွားခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဒေတာတွေကို တတိယပါတီလုပ်ငန်းများနှင့် ဝေမျှခြင်းပြုပါသလား။
(၁) vivo သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် စီမံရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန် third-party ဝက်ဘ်ဆိုက်အခြေခံတည်ဆောင်မှုပေးသူများကို အသုံးပြုသည်။ cookies နှင့်ဆက်စပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် ၎င်းတို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင် လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်သည်။
(၂) vivo သည် သင်၏ အမည်ဝှက်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်နှင့် တတိယပါတီ cookie များကို အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်လုပ်ဆောင်မှုများကို စီမံခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများအတွက်အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နှင့် ကြော်ငြာခြင်းများကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ကြော်ငြာနှင့်မီဒီယာ ပံ့ပိုးပေးသူများကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့မှ သေချာစွာရွေးချယ်ထားပြီး တာဝန်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သင်၏အချက်အလက်များကို အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
Analytic cookie များနှင့် အလားတူနည်းပညာများ၏ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းအား vivo အား ကျွန်ုပ် တားမြစ်နိုင်ပါသလား။
သင်သည် cookies များကို ချိန်ညှိချက်များ မှတစ်ဆင့် analytic cookies နှင့်အလားတူနည်းပညာများကို vivoမှ အသုံးပြုခြင်းကို အချိန်မရွေး တားမြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသည် ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ဝဘ်ဆိုဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ cookies များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ site ရှိ အလားတူနည်းပညာအချက်အလက်များကို သုံးနိုင်သည့်တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် မှီခိုနေသည်ကို နားလည်သဘောတူပြီးခွင့်ပြုစေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ siteရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ settings များသည် cookies များနှင့် အသုံးပြုသောဒေတာအတွက်သာ အကျိုးရှိသည် ။ တတိယပါတီများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ရန် သူတို့၏ Cookie သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကို ကိုးကားပါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို vivo က မည်သို့ကာကွယ်သနည်း?
အချို့သောအချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို သေချာစေရန် encryption နည်းပညာအသုံးပြုမှု အပါအဝင် သင်၏အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုများမှ သင်၏အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် vivo သည် သင့်လျော်သောနည်းပညာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
သင့်၏ အခွင့်အရေးများနှင့် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်များ
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက် ကာကွယ်ရေးဥပဒေများနှင့် မကိုက်ညီဟု သင်ယုံကြည်ပါက သင်သည် စည်းမျဉ်းဥပဒေဆိုင်ရာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ (သို့မဟုတ်) သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်နှင့် တိုင်ကြားနိုင်သည်။
* မှတ်ချက်။ vivo အကောင့်မှ အသုံးပြုသော cookies များကို ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ cookie ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒတွင် ၎င်းတို့ကိုအချိန်မရွေး ထိရောက်စွ ာမွမ်းမံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ သဘောတူပါ။ အခြား undescribed cookies များနှင့် အလားတူနည်းပညာများ၏ အချက်အလက်များရှိပါက vivo account ၏ cookies ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ရှုပါ။